Thursday September 27, 2018 - 11:25:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War kasoo baxay madaxa fulinta Bankiga adduunka ayaa lagu sheegay in lacagtan aan si toos aheyn loo gelin doono dhaqaalaha Soomaaliya waana mashruuc maalgelineed oo lasoo marin doono hay'ado samafal ah.
World Bank wuxuu sheegay in illaa iyo hadda aysan aqbalin hanaanka ammaahda lagusiin karo dowladda Federaalka maamaada aysan buuxin shuruudihii ay horay ugugudbiyeen, hay'adda IMF-ta iyo jihooyin kale oo arrimaha dhaqaalaha qaabilsan ayaa horay madaxda dowladda Federaalka ugu eedeeyay in musuq maasuq uu ka dhax jiro laamaheeda maaliyadda.
Wakaaladda wararka reuters ayaa sheegtay in lacag dhan $80 uu Bankiga adduunka u qorsheeyay in Soomaaliya lasiiyo balse ma ahan lacag naqdi ah oo maamulka Farmaajo si toos ah loosiinayo mana ahan lacag ammaah ah.
Bayaan gelinkii dambe ee maalintii talaadada kasoo baxay Bankiga adduunka ayuu ku sheegay in 60 Milyan dollar oo lacagtaas kamid ah lagu bixin doono maalgashiyo arrimaha bulshada ah sida taageero dhanka waxbarashada,caafimaadka iyo biya nadiif ah oo lagala shaqeyn doono dowladda Federaalka.
Bankiga adduunka wuxuu sheegay in tani ay tahay mashruucii ugu horreyay oo ay Soomaaliya ka fulinayaan tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii Siyaad Barre 1991, illaa iyo haddana aysan jirin dowlad hanaankeeda maaliyadeed hufanyahay oo ay la shaqeeyaan.
Wasiirka maaliyadda DF-ka ayaa dhowr mar sheegay in ay madaxda Bankiga adduunka ka codsadeen in daymaha laga cafiyo islamarkaana lasiiyo lacago Dayn ah balse laga diiday oo shuruudo adag lagu xiray.
Madaxa isgaarsiinta Villa Somalia oo sharraxaad ka bixiyay waxa ay tahay lacagta (World Bank) uu Soomaaliya uqorsheeyay ayaa xaqiijiyay in aysan aheyn lacag Dayn ah balse ay tahay Taakulayn, qoraal uusoo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in dowladda Federaalka aan loo ogolayn in ay Dayn ka qaadato Bankiyada adduunka iyo hay'adda IMF.
Sanad walba Hay'ado,ururko iyo dowlado reergalbeed ah ayaa dhaqaale Boqolaal Milyan oo dollar ah fagaarayaasha caalamiga ah uga ballan qaada dowladda Federaalka balse majiraan lacago illaa iyo hadda DF-ka ay heshay oo ay baraare ku gaartay waana dowlad gacmaheedu taaganyihiin marwalba islamarkaana aan mushaar joogta ah siin karin ciidamadeeda iyo shaqaalaheeda.
Erdogaan oo Shaqada ka Eryay Guddoomiyihii Bankiga dhexe ee Turkiga.
Al Shabaab Oo Markale Xukunno Daldalaad ah ka Fulisay Magaalooyinka Bu'aale iyo Kurtun Waareey [Warbixin].
Jawaasiis u shaqeynayay Dowladaha Mareykanka iyo Kenya oo lagu dilay degmada Xagar Ee Jubbada Hoose [Warbixin].